Izinto ezongezelelweyo ezenzekayo ngeTempile Run: Abazingeli beNdyebo, kodwa kwiphazili | I-Androidsis
Ukuqhutywa kwetempile: Abazingeli beNdyebo yinto entsha kule saga Imidlalo yeeselfowuni, kodwa ngoku esondela kwi-KING's Candy Crush. Ngamanye amagama, xa usilela kwezimvo, thatha umdlalo wephazili njengo-KING kwaye wenze inzuzo okanye hayi, kuba ukufana kuninzi kangangokuba ekugqibeleni uhlala ubuyela kwinto yokuqala.
Xa sinembaleki enkulu engapheliyo kunye neeTempile ezibalekayo, ngoku beza kuthi nazo iphazili efana neCandy Crush kaKumkaniNangona siyisa kumhlaba waso kunye nabo baphambili bangayekiyo ukusebenza, nangona sizakubabona kuphela kwizikrini zokulayisha ixesha ... Singathanda ukuba babenento eyintsusa kunokuba bezama ukufumana izibonelelo kwisaga inesithuba sayo ngaphakathi kudidi lweimbaleki ezingapheliyo.
1 Okufanayo, nangona kwenziwe kakuhle
2 Amanqanaba amatsha yonke imihla
3 Iphazili ngaphandle kokunye
Okufanayo, nangona kwenziwe kakuhle
Nathi asizukuya Bethelela ukuSebenza kweTempile: Abazingeli beNdyeboKungenxa yokuba ubuncinci, xa kuziwa kwipuzzle yohlobo lwe-KING, isebenza kakuhle kwaye iyasifumana. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba njengoko sihamba ngokwamanqanaba asifundisa ngeendlela ezahlukeneyo esinokuthi sizidibanise ezi ziqwenga ku-3 ngokulandelelana, isikwere nolunye uthotho lwendibaniselwano.
Zonke ziya kusifumana sizifumene iziqwenga ezingumzekelo zokuphelisa imiqolo okanye iikholamu ezipheleleyo njengoko kusenzeka ngoqongqothwane. Ke, kancinci kancinci, siya kufumanisa ukuba ngesakhono esincinci sinokubamba amanqanaba apheleleyo kwiintshukumo ezahlukeneyo. Kwaye konke okunye, uyazi, uqaphele ukuba udibanise iziqwenga ezizodwa kwaye uqhubeke ngokukhawuleza. Inokuba yeyiphi eyahlulahlula kancinane kuyo yonke eminye imidlalo yohlobo lwe-KING.
Njengokuba siqhubela phambili kwinqanaba siza kunceda iimbaleki zethu ekukhangeleni ubuncwane ngaphambi kokuba inkawu ebabayo ibabambe. A iqela elenziwe ngabalinganiswa Sifumene kwiitayitile ezahlukeneyo zale saga kwaye zimbalwa. Si lonke uthotho lwabo luphawulet kwakwinye iTempile Run 2 eyafika ukuze iqhubeke nokuvuna impumelelo yeyokuqala njengenye yezimanga kwizixhobo eziselfowuni kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngokuqinisekileyo siya kuqhubeka nokubonelela ngeentambo zesithathu kunye nokunye ukujija kolu ngcelele njengoko kwenzekile kwiiNtaka ezinomsindo.
Amanqanaba amatsha yonke imihla
Kwiphazili enje, Umxholo omninzi uyafuneka ukugcina abadlali babambeke mihla le. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, kwi-Temple Run: Abazingeli beNdyebo sinokufikelela kumanqanaba amatsha mihla le liqela lophuhliso ngokwalo eliya kubaquka. Bekungayi kuba kubi ukuba bebewusebenzile nomhleli wenqanaba esinokuthi sizenzele ngokwethu emva koko sabelane ngalo noluntu lwabadlali; Ngale ndlela, into eyahlukileyo neyintsusa iya kwenziwa ukuze kwenziwe umdlalo oza kwahluka kwabanye.
Njengoko oku kungenjalo okwangoku, sihlala ngenxa yoko iTempile Run isinika kona: Abazingeli beNdyebo kwaye loo manqanaba kunye nezinto ezisilindeleyo kumdlalo esithemba ukuba ziya kuwusebenza kwaye zongeze amakhulu amanqanaba ngamaxesha athile. Ukuba akunjalo, iya kuba ngumdlalo weentsuku ezimbalwa emva koko udlulele komnye ngokukhawuleza.
Iphazili ngaphandle kokunye
Kwaye ke basishiya ne incasa emnandi neyomuncu yesaga eye yakwazi ukufumana amaxesha amnandi kakhulu nezo mbaleki zingapheliyo apho ihlathi, imiqobo kunye neentshaba zilandele iinyawo zethu. Sijongene ne-freemium, ke uyazi ukuba sithetha ngantoni.
Ngokobuchwephesha ngumdlalo ophumeleleyo, kodwa kusilela oko kukuhenda okwenziwa NGUKUMKANI. Asithethi ukuba ukudityaniswa kwezicucu zeziphumo akupholanga, kodwa kuya kufuneka ukuba kube gimmicky ngakumbi kwaye bombastic.
Ukuqhutywa kwetempile: Abazingeli beNdyebo babetha nje iVenkile yokudlala ukuba yenye iphazili phakathi kokuxineneyo olo hlobo. Ngethemba lokuba baya kusebenza kuyo ngakumbi kwezi zihlandlo zilandelayo kwaye ubuncinci babe yinto yoqobo ...
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-2.5
Ukuqhutywa kwetempile: Abazingeli beNdyebo
UMDLALO OMDALA PZL
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ukuqhutywa kweTempile: Abazingeli beNdyebo okanye xa ndinqamlezene nemibono yokuqalisa umdlalo omtsha